Ry Fanahy nomena anay - Fihirana Katolika Malagasy
Ry Fanahy nomena anay
Daty : 24/05/2007
Dimampolo andro aorian’ny fankalazana ny paka ny fetin’ny pentekôty. Fety ankalazana ny nidinan’ny Fanahy masina tamin’ireo Apôstôly. Tanteraka izay nampanantenainy talohan’ny niakarany any an-danitra, dia ny handefasany ny Fanahiny.
Tamin’io andro io no niandohan’ny Fiangonana voalohany. Rehefa nandray ny Fanahy Masina manko ireo Mpianatra tamin’izay dia feno hery, ary lasa sahy nitory an’i Kristy vaovao Mahafaly, rehefa niery tsy sahy niseho vahoaka noho ny tahotra talohan’izay !
Izao pentekôty izao no fotoana ivavahantsika ho an’ny Fiangonana. Fotoana ihany koa andinihantsika ny fiombonantsika amin’io Fiangonanan’i Kristy io.
Tsara koa ny amerenenana etoana ireo fanomezana fito ny Fanahy Masina sy ireo fanomezam-pahasoavana sivy any Aminy (Charismes). Tany amin’ny katesizy fahiny no nianarana azy, saingy fotoana amelombelona hatrany ny finoantsika izao. Izay no anton’ny fankalazana ao amin’ny litorjia. Natao hamelombelomana, sy koa hanamafy ny finoana.
Fanomezana fito ny Fanahy Masina (1kor 12,8-11.) :
Fahendrena, fahazavan-tsaina, fahalalana, hery, fitiavam-bavaka, fahatahorana an’Andriamanitra.
Fanomezam-pahasoavana sivy (1Kor 12,28-31) :
Nisy ny natsoina ho Apôstôly, ho mpaminany; ho mpampianatra; ao ireo nahazo fanomezana hanao fahagagana, hanasitrana ny marary, ao koa ireo izay hanampy, hitondra, hiteny fitenysamihafa, handika teny.
Niakatra any an-danitra Izy >
Bii - 21/05/2015 17:58
Tsy ampy iray ny fanomezan'ny Fanahy Masina voatanisa eo: Ny fifidianana.
Ny vokatry ny Fanahy sivy dia ao amin'ny Galata5,22-23a
"Ny vokatry ny Fanahy kosa dia izao: fitiavana, fifaliana, fiadanam-po, fahari-po, hamoram-panahy, hazavam-po, tsy fivadihana,fahalemem-panahy, fahalalana onona"
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0241 s.] - Hanohana anay